Windows application ကိုအစားထိုးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကြည့်ရှုသူ (၁၀) ဦး Emulator.online 🥇🥇
Windows 10 ၏မူလဓာတ်ပုံကြည့်ရှုသူသည် system user များအတွက်ရေပန်းစားသည်မဟုတ်။ အဓိကအားဖြင့်ပုံများဖွင့်ရန်နှေးနှေးခြင်းနှင့်ပုံစံအနည်းငယ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ရရှိနိုင်တည်းဖြတ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းကန့်သတ်ထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ပရိုဂရမ်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်သင်၏ Windows PC တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ပုံရိပ် (၁၀) ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထွက်ခွာသည်!
၁။ FastStone Image Viewer
ပေါ့ပါးပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး FastStone Image Viewer ကပုံများကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်ကြည့်ရှုရန်၊ ချဲ့ရန်နှင့် EXIF ​​အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ Folder navigation ကို top menu ကနေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိရိယာများကိုမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေရှိဘားတွင်ရနိုင်သည်။
ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော extension များနှင့်လိုက်ဖက်စွာတည်းဖြတ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းပေးထားသည်။ ၎င်းတို့တွင်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အရွယ်အစားပြောင်းလဲခြင်း၊ မျက်လုံးနီခြင်းဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အလင်းချိန်ညှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဆလိုက်ရှိုးများပြုလုပ်ရန်၊ စာသားများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုဓာတ်ပုံများပေါ်တွင်အခြားရွေးချယ်စရာများလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
FastStone ပုံရိပ်ကြည့်ရှုသူ (အခမဲ့) - Windows 10, 8, 7, Vista နှင့် XP ။
Winaero မှာစာသားအရ Windows settings နဲ့ features တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်တဲ့ function များစွာရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့အနက်မှဂန္ထဝင် system viewer ကို Windows 10 သို့ယူဆောင်လာရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ပြီးရှာဖွေပါ Foto ရှာဖွေရေး box ထဲမှာ။ ကိုနှိပ်ပါ Classic Apps ကိုရယူပါ / Windows ဓာတ်ပုံကိုသက်ဝင်စေ ကြည့်ရှုခြင်းr ။ ထို့နောက်သွားပါ Windows Photo ကိုဖွင့်ပါ ကြည့်ရှုခြင်းr.
သင့်အနေဖြင့်လျှောက်လွှာ၏မူလဆက်တင်များသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ Photo Viewer တွင်သတ်မှတ်ထားသော application ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်ပေါ်လာသည့် list မှသွားပါ Windows Photo Viewer။ ဟုတ်ကဲ့၊ ရှေးကာလကကဲ့သို့ရွေးချယ်စရာများရှိလိမ့်မည်။
Winaero Tweaker (အခမဲ့) - Windows 10, 8 နှင့် 7
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်အကောင်းဆုံးသော interface ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ImageGlass သည်ပုံရိပ်ကောင်းကောင်းကြည့်ရှုသူများအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုပေးသည်။ လျှောက်လွှာကသင့်အားဒေါင်လိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ပုံရိပ်များကိုလှည့်ရန်၊ အကျယ်၊ အမြင့်ကိုချိန်ညှိရန်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
တိကျသော image editors များနှင့် extension များကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Photoshop တွင် PNG ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ toolbar, thumbnail panel နှင့်အမည်းရောင်သို့မဟုတ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနောက်ခံကိုဖော်ပြရန်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဤပရိုဂရမ်သည် JPG, GIF, SVG, HEIC နှင့် RAW ကဲ့သို့သောပုံစံ ၇၀ ကျော်ဖြင့်ဖိုင်များကိုထောက်ပံ့သည်။
ImageGlass (အခမဲ့): Windows 10, 8.1, 8, SP1, 7
အလင်း၊ မြန်။ အလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ JPEGView ကိုသတ်မှတ်နိုင်သောစကားလုံးများဖြစ်သည်။ ဒီ application သည် toolbar ကိုရိုးရှင်းသော၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော icon များဖြင့်ဖော်ပြပေးသည်။ မြင်ကွင်းအောက်ခြေတွင်မောက်စ်ကိုတင်ထားမှသာပြသလိမ့်မည်။ histogram အပါအ ၀ င်ဓာတ်ပုံနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကို i အက္ခရာကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
သင် pointer ကိုရွှေ့လိုက်လျှင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောတည်းဖြတ်ရေးရွေးချယ်မှုအချို့ကိုပြလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့အနက်ဆန့်ကျင်ဘက်၊ တောက်ပမှုနှင့်ပြည့်နှက်မှုကိုထိန်းညှိပေးသည့်အရာ၊ ၎င်းသည် JPEG, BMP, PNG, WEBP, TGA, GIF နှင့် TIF အမျိုးအစားများကိုထောက်ပံ့သည်။
JPEGView (အခမဲ့) - Windows 10, 8, 7, Vista နှင့် XP
123 Photo Viewer သည် LIVP, BPG နှင့် PSD ကဲ့သို့သော Windows အတွက်အခြားပုံရိပ်ကြည့်သူများတွင်ရှာရန်ခက်ခဲသောပုံစံများကိုထောက်ခံသည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းကသင့်အားတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ချဲ့ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ထို့အပြင်၎င်းတွင်စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ပုံရိပ်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်စာသားထည့်ခြင်းစသည့်တည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ ပရိုဂရမ်သည် GIF, APNG နှင့် WebP ကဲ့သို့သောကာတွန်းဖြန့်ချိမှုများကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကတော့ home screen မှာပေးရတဲ့ version ကိုပေးရတာပါ။
123 Photo Viewer (အခမဲ့) - Windows 10 နှင့် ၈.၁
IrfanView သည်ပေါ့ပါး။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောကြည့်ရှုသူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပုံတစ်ပုံကိုဖြတ်ခြင်းနှင့် EXIF ​​အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသောခလုတ်များဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်တွင် PNG မှ JPEG သို့လွယ်ကူစွာပြောင်းနိုင်သော format ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။
သင်သည်ရေစာအမှတ်အသားတစ်ခုကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ နယ်နမိတ်များကိုပေါင်းထည့်နိုင်သည်နှင့်အရောင်ပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ တည်းဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ပင်လျှင်အသုံးပြုသူသည်ဖိုင်ကိုအရွယ်အစား ပြောင်းလဲ၍ လှည့်နိုင်သည်၊ စစ်ထုတ်သည့်အရာများနှင့်သက်ရောက်မှုများကိုသုံးနိုင်ပြီးအရောင်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခုပြောင်းနိုင်သည်။
တည်းဖြတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက်ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်အလိုလိုသိမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းကိုပေါ်တူဂီဘာသာစကားဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက် developer ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဘာသာစကားအထုပ်ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်လုပ်ငန်းစဉ်သည်မြန်ဆန်သည်။
IrfanView (အခမဲ့) - Windows 10, 8, 7, Vista နှင့် XP
XnView သည်နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ချက်များစွာပါရှိသည့်နောက်ဓာတ်ပုံကြည့်ရှုသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုအတွက်အလျင်မြန်ဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အမျိုးအစား ၅၀၀ ကျော်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးသုတ်သင်ခြင်းများကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းတို့အကြားဖိုင်များစွာကိုတစ်ပြိုင်နက်ပြောင်း။ ပြောင်းပါ။
ရုပ်ပုံတွေကိုအရွယ်အစားချုံ့ခြင်း၊ ဖြတ်ယူခြင်း၊ ဆွဲခြင်းနှင့်အနီရောင်မျက်လုံးပြင်ဆင်ခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားသူများအကြားထိုကဲ့သို့သောတောက်ပမှု, ဆနျ့ကငျြဘ, ရွှဲ, အရိပ်အဖြစ်ရှုထောင့်ကိုချိန်ညှိ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းရှိပါတယ်။
XnView (အခမဲ့) - Windows 10 နှင့် ၈.၁
ပေါ့ပါးပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသော HoneyView သည်ရုပ်ပုံကြည့်သူမျှော်လင့်ထားသည့်အခြေခံအင်္ဂါရပ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာချဲ့ခြင်း၊ ချဲ့ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံကိုလှည့်ခြင်းနှင့်နောက်သို့သွားခြင်းသို့မဟုတ်ယခင်ပုံသို့ပြန်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်ထိပ်ရှိခလုတ်ကို အသုံးပြု၍ EXIF ​​အချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။ batch image format ကိုပြောင်းခြင်းသာမက၊ compressed files များကို decompress လုပ်စရာမလိုပဲကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
မင်္ဂလာပါ (အခမဲ့): Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista နှင့် XP ။
Nomacs သည် ၀ င်းဒိုး Windows Photo Viewer နှင့်ဆင်တူသည်။ ထို့ကြောင့်၊ Microsoft ပရိုဂရမ်ကိုနှစ်သက်သောသူသည်ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုရန်မခက်ခဲသင့်ပါ။ Display ရဲ့မျက်နှာပြင်အရ ၁၀၀% (သို့) ကန ဦး မျက်နှာပြင်အကြားရှိ mode ကိုအလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်။
မီးမောင်းထိုးပြသည့်ခလုပ်များ အသုံးပြု၍ ပုံကိုလှည့်ရန်၊ အရွယ်အစားညှိရန်နှင့်ဖြတ်ရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည်တည်းဖြတ်ခြင်းကိရိယာများ၊ ပြည့်နှက်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ပီစီအိုင်ကွန်ဖန်တီးခြင်းနှင့်အခြားအရာများစသည်တို့ကိုလည်းပေးသည်။
ကလောင် (အခမဲ့) - Windows 10, 8, 7, Vista, XP နှင့် 2000
၁၀။ Google Photos
သင်အလိုရှိပါကကွန်ပျူတာနှင့် Google Drive တွင်သိမ်းထားသောရုပ်ပုံများကိုပရိုဂရမ်၏ဝဘ်ဆိုက်သို့လည်းတင်ပို့နိုင်သည်။ နေရာဒေသများ၊ ရိုးရှင်းသောတည်းဖြတ်ရေးကိရိယာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ၎င်းတွင်ယခင်နှစ်များအတွင်းထိုနေ့မှပင်အလိုအလျောက်စုရုံးခြင်းနှင့်အမှတ်တရလက်ဆောင်များရှိသည်။
ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများ (အခမဲ့): ဝဘ်
Windows သည်မူလ system program ကို default viewer အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဓာတ်ပုံအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်ရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ download လုပ်ထားသောပရိုဂရမ်သို့ပြောင်းရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
1. ပုံတစ်ပုံကိုညာခလုပ်နှိပ်ပြီးဖွင့်သည့်မီနူးတွင်နှိပ်ပါ ဖွင့်ပါ;
2. သင်ပြထားသောစာရင်းတွင်ပြသမှုကိုကြည့်နေသရွေ့ရွေးချယ်ပါ အခြား application တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ;
3. ပရိုဂရမ်အိုင်ကွန်ကိုမနှိပ်မီဘေးရှိအကွက်ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ အမြဲတမ်းဒီကိုသုံးပါ ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန် application .jpg (သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုံရိပ် extension ကိုမဆို);
4. ယခုပရိုဂရမ်ကို နှိပ်၍ အတည်ပြုပါ အိုကေ.
ပရိုဂရမ်အမည်ကိုသင်ရှာမတွေ့ပါကစာရင်းကို scroll လုပ်၍ သွားပါ နောက်ထပ် application များ။ သင်ရှာမရသေးပါကနှိပ်ပါ ဤကွန်ပျူတာရှိအခြားလျှောက်လွှာတစ်ခုကိုရှာပါ။ ဖွင့်လှစ်သော box ထဲမှာရှာဖွေရေးဘားတွင်ပရိုဂရမ်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သင်ရှာတွေ့ပါက၎င်းကို နှိပ်၍ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ဖွင့်လှစ်။ ထို့နောက်အထက်ပါအဆင့်များကိုထပ်လုပ်ပါ၊ လျှောက်လွှာကိုလျှောက်လွှာရွေးချယ်မှုများထဲတွင်ထည့်ပါလိမ့်မည်။
SeoGranada ကအကြံပြုသည် -
PC နှင့် Mac အတွက်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဖွင့်စက်များ